Mamolavola taratasy fangatahana fahazoana mivezivezy an-tsitrapo
Posted by Tranquillus | Sep 12, 2020 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Ny fivezivezena an-tsitrapo azo antoka na MVS dia rafitra apetraka hamelana ny mpiasa iray handao vetivety ny asany mba hanao hetsika ao anatin'ny orinasa hafa. Na izany aza, mitazona ny fahafaha-miverina amin'ny toerany amin'ny orinasany voalohany izy, mandritra ny fotoana voafaritra. Ny fepetra mifandraika amin'ny fiantohana ny fivezivezena an-tsitrapo, tsy mitovy amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fivezivezena, dia voafaritra ao amin'ny Andininy L1222 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa. Ireo fepetra ireo dia natao ho an'ireo mpiasa nanompo ny orinasa nandritra ny 2 taona misesy na tsia. Azo ampiharina amin'ny orinasa mampiasa mpiasa 300 farafaharatsiny. Raha tsy miverina ny mpiasa aorian'ny fotoana nifanarahana dia heverina ho fanitsakitsahana ny fifanarahana izany. Tsy miova ny fomba fametraham-pialana. Ho fanampin'izay, tsy hisy ny fampandrenesana fanajana.
Ahoana ny fomba fangatahana fihetsika an-tsitrapo azo antoka
Amin'ny ankapobeny, tsy misy fombafomba hafahafa arahiny. Etsy ankilany, zava-dehibe ny fandefasan'ny mpiasa taratasy fisoratana anarana miaraka amin'ny fanekena ny fahazoana azy. Ny mpampiasa dia tsy voatery hamaly ny fangatahan'ny mpiasa ao anatin'ny fe-potoana voafaritra. Na izany aza, raha mahazo fandavana roa mifandimby ny mpiasa dia zony ny mangataka fiofanana eo ambanin'ny CPF tetezamita matihanina. Na ahoana na ahoana, ny mpampiasa dia tsy voatery hamaritra ny anton'ny fandavany.
Raha manaiky ny orinasa dia hisy fifanarahana hivoaka. Io dia ahitana ny tanjona, ny faharetany ary ny datin'ny vanim-potoana azo antoka fivezivezena an-tsitrapo. Ho hita ao ihany koa ireo hevitra hojerena mba hahafahan'ny mpiasa miverina amin'ny toerany.
Mazava ho azy fa ny mpampiasa dia afaka mandà ny famelana ny mpiasa hiverina amin'ny toerany amin'ny faran'ny fotoanan'ny fivezivezena. Azony atao tokoa ny mandroaka ilay mpiasa, raha toa ka afaka manamarina ny tena anton'ny fandroahana izy. Araka izany, handray tombony amin'ny fiantohana tsy an'asa ny mpiasa.
HAMAKY Mpiasan'ny mailaka amin'ny fanambarana ny fandraisanao anjara amin'ny fivoriana iray
Fomba famoronana fangatahana fivezivezena an-tsitrapo azo antoka
Ireto misy santionany taratasy fangatahana MVS azonao ampifanarahana amin'ny toe-javatra iainanao. Aza adino ny mamaritra ny antony manosika anao hangataka io fangatahana io. Zava-dehibe koa ny fampivelarana ny fanirianao fanamby, nefa tsy mampiseho tsy fahampian'ny fahalianana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Ny hevitra dia ny handresy lahatra ny mpampiasa anao hanome anao izany alalana izany.
Lohahevitra: Fangatahana fivezivezena an-tsitrapo azo antoka
Andriamatoa / Ramatoa mpitantana ny olombelona,
Mahatoky amin'ny orinasanao hatramin'ny (daty), noho izany dia apetrako ny fangatahako fivezivezena an-tsitrapo mandritra ny fotoana maharitra (mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fiarovana ny asa (daty manan-kery) sy ny lahatsoratra L1222- 12 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa.
Mafana fo amin'ny (saha) foana, fotoana tokony hahitako faravodilanitra hafa mba hampivelarana ny fahaizako. Ity traikefa vaovao ity dia fotoana mety hahitako tsikelikely ny tanjoko manokana sy matihanina.
Nandritra ny taona maro niasako tao anatin'ny fikambanananao dia naneho endrika matihanina lehibe sy fahatsapana andraikitra ho ohatra tsara aho. Nanolo-tena foana aho hamita tsara ny iraka rehetra nomenao ahy hatrizay. Natokako ihany koa ny fahaizako rehetra amin'ny fampandrosoana marina ny fikambanana.
Faly be aho raha afaka manaiky ny fangatahako ianao. Mijanona ho eo am-pelatananao manontolo aho mba hiresaka momba ny fomba samihafa mifandraika amin'ny mety ho fiverenako.
Miandry valiny tsara avy aminao, mangataka aminao aho mba handray, Tompoko / Ramatoa, ny fanehoana ny arahaba feno.
Foto-kevitra: Fihetsiketsehana an-tsitrapo azo antoka
Andriamatoa / Ramatoa Talen'ny Human Resources,
Amin'izany dia tiako ny mangataka ny fifanarahan-kevitrao mandritra ny fotoana azo antoka amin'ny fivezivezena an-tsitrapo (ny fotoana ilaina), araka ny andininy L1222-12 ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa.
Hatramin'ny (daty nidiranao tao amin'ny orinasa) dia napetrako hatrany teo amin'ny serivisy ho an'ny fikambanananao ny fahaizako. Ny vokatra tsara nomeko anao tato anatin'ny taona vitsivitsy dia manaporofo ny tsy fandraisako anjara tsy tapaka sy ny maha-zava-dehibe ahy.
Mba hahatratrarako ny tanjoko manokana sy matihaniko dia zava-dehibe amiko ny misokatra amin'ireo fotoana hafa amin'ny sehatry ny (saha voalaza). Ity traikefa nahafinaritra miandry ahy ity dia mety hahafahako mitondra zava-baovao amin'ny fikambanananao mandritra ny fotoana mety hiverenako.
Miangavy anao aho hanaiky ny fangatahako. Raha hiady hevitra momba ny fepetra nifanekena nataoko aho dia mijanona ho eo am-pelatananao manontolo.
Manantena valiny ankasitrahana avy any aminao, raiso Ramatoa, Tompoko, ny fanehoana ny veloma farany ambony indrindra anao.
Ireo maodely ireo dia azo lavina arakaraka ny mombamomba anao. Izy ireo koa dia afaka manitatra mifanaraka amin'ny fanirianao sy ny tetikasanao. Ataovy ao an-tsaina fa tsy hanaratsiana ny toerana tazominao izao, fa kosa hanasongadinana ny fanirianao hahazo fahafaham-po sy fanamby. Arindrao tsara ny hevitrao mba tsy ho be loatra ny taratasinao.
HAMAKY Taratasy taratasy ho an'ny fangatahana fampiakarana karama mahomby
Dingana hahazoana ny fivezivezena an-tsitrapo azo antoka
Araka ny voalaza etsy ambony, tsy misy fomba manokana momba an'io karazana fangatahana io. Mila manoratra taratasy fotsiny ny mpiasa miaraka amin'ny fanekena ny fahazoana azy. Eny tokoa, ny fandefasana ny fangatahana an-tsoratra dia antoky ny fanarahan-dia. Avy eo, ny sisa dia miandry ny valiny avy amin'ny mpampiasa. Ny vanim-potoanan'ny fivezivezena an-tsitrapo azo antoka dia teboka iray nifampidinihan'ny roa tonta.
Ny zava-dehibe indrindra dia ny fitandremana tsara ny taratasy ary ny fanaovana ady hevitra henjana mba hinoan'ny mpampiasa tanteraka.
Azo atao izao ny mandao ny orinasa izay iasanao asa hafa, miaraka amin'ny antoka fa afaka miverina ianao raha tsy mandeha araka ny kasaina ny raharaha! Noho ny fangatahana fivezivezena an-tsitrapo azo antoka dia mahazo tombontsoa amin'ny fahalalahana sy filaminana ianao. Safidy mahaliana amin'ny fametraham-pialana io.
Ny fangatahana fivezivezena amin'ny filaminana an-tsitrapo dia mampihena ny risika amin'ny tsy fananan'asa ihany koa. Fomba fananana safidy faharoa eo ambanin'ny kiho. Ity karazana fitaovana ity dia mety hanararaotra orinasa iray ihany koa, satria mamela ny hanafahana toerana iray nefa tsy hahafoana singa iray tsara ao amin'ny fikambanana.
Ampidino ny "Mamorona taratasy fangatahana ho an'ny Secure Voluntary Mobility ohatra 1"	mamolavola-taratasy-fangatahana-ho-voluntary-mobility-secured-example-1.docx – Nalaina in-464 – 20 Kio
Ampidino ny "Mamorona taratasy fangatahana ho an'ny Secure Voluntary Mobility ohatra 2"	mamolavola-taratasy-fangatahana-ho-voluntary-mobility-secured-example-2.docx – Nalaina in-456 – 20 Kio
Mamolavola taratasy fangatahana fahazoana mivezivezy an-tsitrapo 13 Febroary 2022Tranquillus
Teo alohaMiala amin'ny fanombohana orinasa, modely taratasy fangatahana maimaim-poana
manarakaModely taratasy kaontim-pitahirizana fotoana alaina alaina
Master afa-po sy endrika ao amin'ny asa soranao
Modely mailaka noho ny fialantsiny amin'ny mpanara-maso iray
Ahoana no hanoratanao famintinana matihanina?
Ahoana no ahafahanao manao sonia ny mailaka an-tserasera mora sy maimaim-poana